Xulka nageria oo ku guuleestay koobkoodii 3aad ee African cup of nation | stn radio	Friday, October 31st, 2014	Home
Xulka nageria oo ku guuleestay koobkoodii 3aad ee African cup of nation
Feb 11, 2013 - Aragtiyood	Xulka K/cagta ee Nigeria ayaa 19-sano kadib ku guuleystay koobka Qaramada Afrika, kadib markii ciyaartii Finalka aheyd ay gool iyo waxba uga badiyeen xulka Burkina Faso oo taariikhda u aheyd markii u horeysay oo ay Final yimaadaan.
Nigeria ayaa u qalantay inay badiso, markii ay soo bandhigeen ciyaar xirfadeeda sareysay, waxaana bilowga ciyaarta ay weeraryahanadooda bilaabeen daf daf, iyagoo fursado dhowr ah helay, balse ku guuldareystay inay gool u bedelaan.
Daqiiqadii 40aad shan daqiiqo ak hor qeybtii hore ciyaarta ayaa Ciyaaryahan Sunday Mba, kubad uu ka dul qaatay daafacyada ayaa kubadii oo aysan dhul dhicin shabaqa dhinac ka geliyay.
Ciyaaryahanada Nigeria ee weerarka ka ciyaaryaya Moses iyo Ideye ayaana ahaa kuwo mar walba qal qal gelinayay goolhayaha Burkina Faso.
Fursado dhowr ah oo goolal loo fishay ayay iska qasaariyeen Nigeria, laakiin daafacyada Burkina Faso ayaa mar walba ahaa kuwo baraarugsan.
Burkina Faso ayaa isku dayaysay mar walba inay goolka iska soo bar bareeyaan, hase ahaatee feejignaanta daafacyada Nigeria iyo Goolhayahooda ayaa mar walba beeninaya hanjabaadaha ka imaanayay ciyaartoyda Burkina Faso oo uu ugu horeeyay Bance.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa Nigeria ku sigatay inay gool labaad dhaliso, waxaana kubad uu helay Ideye uu meel cidlo ah ka haleeli waayo, dabadeedna ay banaanka u baxday, taasoo aheyd in hadii uu taaban lahaa in shabaqa ay geli laheyd.
Tababaraha Nigeria Steven Keshi ayaa Koobka u qaaday Nigeria isagoo ciyaaryahan ah sanadkii 1994-tii, waxaana uu nasiib u yeeshay in mar kale isagoo Tababaro ah uu u qaado Koobkan, waxaana uu noqday ninkii labaad oo isagoo ciyaaryahan iyo Tababare Koob kula guuleysta xulkiisa.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha Xiriirka K/cagta Afrika Issa Xayaatu, Gudoomiyaha FIFA Sep Blatter iyo Madaxweynaha Koofur Afrika Jacob Zuma oo dalkiisa lagu marti gelinayay ayaa biladaha gudoonsiiyay labada kooxood, waxaana Madaxweynaha Koofur Afrika lagu sharfay inuu Koobka gudoonsiiyo Kabtanka Nigeria Joseph Yobo, waxaana mar qudha bilowday dabaal deg iyo damaashaad ay sameynayeen ciyaartoyda iyo Taageerayaasha.